IIMBONO EZINGAMA-50 EZIPHAMBILI ZENDLELA YOKUHAMBA NGOMTHI-UYILO LWENDLELA YEWOOD - UYILO LWEKHAYA
Iimbono ezingama-50 eziPhambili zeNdlela yokuhamba ngomthi-Uyilo lweNdlela yeWood
Uninzi lwethu luyalukhumbula uvakalelo lokunyathela kwibhodi yendlela yexesha ngalinye, indibanisela yokucoca i-rustic kunye nolindelo lweziyolo ezizayo.
Ngokufanayo, umntu unokukhumbula loo ndlela yasekwindla ehlathini, kunye neendlela zokuhamba ezenziwe ngomthi ezazisithwala siwele umlambo.
Kutheni ungafundisi ezinye zeemvakalelo ezingenaxabiso apho kuhlala khona umntu wakho?
Indlela yokuhamba ngomthi yenye ye-shabby-chic eya kwindlela yamatye kunye nodaka okanye indlela ebekwe ngezitena. Indawo ehamba ngeplanga inika umtsalane onokubonelelwa ngomthi kuphela, ukusuka kwisanti efumileyo kunye nezimbo zolwandle ukuya kuguqulelo lwangoku. Iindwendwe ngokungathandabuzekiyo ziya kuphumelela ukusuka kwinqanaba lokuqala, kwaye ziyavuya ukubuyela ekhayeni lakho amaxesha ngamaxesha.
Nokuba ujonge ukufezekisa uluvo olutsha lwePacific Northwest retreat okanye ubeke umva iMalibu manse, indlela yakho eyenziwe ngomthi lithuba lakho lokubonisa ezona mvakalelo zilula ngelixa usenza umbono ongalindelekanga. Ngenxa yokuba indlela yokuhamba ngomthi yenzelwe ukuphucula kunye nokuncoma ubume bendalo, ngekhe ubenexhala ngokubeka unyawo olungalunganga ngaphambili kunye nokuphazamisa ubume bekhaya lakho.
Zininzi iindlela ebomini, iindlela kunye neendlela esizithathayo kwiindawo ezahlukeneyo; ezinye sizidlula kube kanye, ngelixa ezinye sizinyathela amashumi eminyaka.
Ezi zimvo zingama-50 zibalaseleyo zokuhamba ngenyawo ngokungathandabuzekiyo ziya kukubona ukutyhubela iminyaka njengomhlobo omdala kodwa ongenaguga, esamkela zonke iinyawo kunye nezinye ezininzi ezizayo.
I tattoo yomlenze uyilo lwamadoda
Uhlobo lweenwele zangoku endodeni
Ukuthandaza izandla kunye ne tattoo
I tattoo yomlenze igubungela izimvo
Utata kunye nonyana tattoo yokuloba
wezilo kunye namadoda tattoo
indlela yokudibanisa iithayile kunye nomgangatho wokhuni
Ukuphuma kwesisu imibono ye tattoo yootata